Sheekh Shariif Oo Muqdisho ku noqday. Ruunkinet 28/10/2009
Madaxweynaha Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maalmahan dalka dibadda ugu maqnaa ayaa saaka barqadii wuxuu dib ugu noqday dalka Soomaaliya, gaar ahaan Caasimaddiisa Muqdisho.
Madaxweynaha oo ka soo dhoofay Dalka Yemen ayaa waxaa safarka ku wehlinayay Wasiirro ay ka mid ahaayeen Wasiirka Arrimaha Dibadda Cali Jaamac Jengeli,Wasiirka Ilaalinta Deegaanka iyo Biiada Burci Xamza, Wasiirka Isboortiga Saleebaan Colaad Rooble, Wasiirka Gargaarka Baniaadannimada Shiikh Maxamuud Cabdi Ibraahim Garweyne iyo xubno kale.
Madaxweynaha oo markii uu ka soo degay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ay soo dhaweeyeen xubno ka tirsan labada Gole ee Dowladda ayaa waxaa dhinaca Xarunta Villa Somalia u soo galbiyay Ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda Soomaaliya.
Intii uusan soo degin Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa gebi ahaan hakad galay dhaqdhaqaaqii Dadka iyo Gaadiidka ee Waddada Makka Al-Mukarrama, taasi oo ay isticmaalaan madaxda Dowladda marka ay dhoofayaan iyo marka ay dalka ku soo noqonayaan intaba.
Ciidamada Amisom ayaa saaka intii ay waddooyinka xirayeen waxay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo ay Xerooyinkooda uga soo baxeen, waxayna ku siqeen deegaanno ka tirsan Degmooyinka Hodan iyo Howl-Wadaag oo aysan horay u joogi jirin, iyagoo ka tallaabay Isgoysyada Dabka iyo Sayidka.
Xaalka Magaalada Muqdisho hadda wuxuu ku soo noqonayaa deganaan, iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dhaqdhaqaaqa Ciidamada Amisom-na ay sheegayaan in Ciidamada ay dib ugu noqdeen xerooyinkooda.